Mpampianatra mitokona: mangataka fanazavana amin’ny filoha | NewsMada
Mpampianatra mitokona: mangataka fanazavana amin’ny filoha
Mangataka ny filoham-pirenena hitondra fanazavana momba ny vola ho an’ny « panier garni » natokana ho an’ny mpiasam-panjakana ny mpampianatra fa miteraka savorovoro. Mandra-piandry ny valin-teny avy amin’ny mpitantana voalohany, satria tsy naharesy lahatra ny fanambaran’ny minisitra tomponandraikitra, hitsahatra ny asa fampianarana rehetra ho an’ny sekolim-panjakana maro eto an-dRenivohitra sy any amin’ny faritra. Voakasika avokoa ny fampianarana ankapobeny sy ny teknika ka niray feo fa miato aloha ny asa. Mbola manampy ny fanazavana ny tokony hanefan’ny fanjakana ny vary mangatsiaka sasany.
Mitarazoka ity resaka vola avy any amin’ny filoha ity satria ao anatin’ny telo volana faharoa tena herin’ny fampianarana no miseho ny olana ka mampitsahatra ny asa. Ireo kilasy hanala fanadinana no tena sahirana fa tsy maintsy vitaina ny fandaharam-pianarana. Ny sekoly miahy tena rahateo manohy an-tsakany sy an-davany ny taom-pianarana.
Manome 48 ora ny fitondrana ny mpampianatra hamahana ny olana sy hitondrana fanazavana maharesy lahatra. Ny mpianatra no mibaby ny vokany hatrany amin’ny farany. Mahatsiaro ho avahana ny mpampianatra nefa samy mpiasam-panjakana ihany mitovy lenta amin’ny mpiasa eny amin’ny birao ary miasa mafy kokoa.